Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibtayda. Waxaana kasoo bixiyaa xubinkayga taranka xubinkeeda taranka kahor inta aan biyo iga imaanin. Waxaana kaliya galmo samaynaa waxyar kadib marka uu dhiiga caadada ka istaago. Ama waxyar kahor inta aan la gaarin muddada dhiigeeda caadada ee xigta. Ma dhici kartaa in ay weli uur qaado? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibtayda. Waxaana kasoo bixiyaa xubinkayga taranka xubinkeeda taranka kahor inta aan biyo iga imaanin. Waxaana kaliya galmo samaynaa waxyar kadib marka uu dhiiga caadada ka istaago. Ama waxyar kahor inta aan la gaarin muddada dhiigeeda caadada ee xigta. Ma dhici kartaa in ay weli uur qaado?
Haa saaxiibtaada weli waxay qaadi kartaa uur.
Waxa aad samaysid waxaa lagu magacaabaa “joojinta galmada”.
Midaana macnaheedu waxay tahay galmo la isku gooyay.
Laakiin weli minidu waxay geli kartaa xubinka taranka saaxiibtaada.
Qaar kamid ah minida waxay kasoo baxaan xubinkaaga taranka kahor inta aadan biyo bixin.
Adigu ma oggaanaysid.
Adigu kama hortagi kartid.
Minidaan waxay rimin kartaa ukunta.
Saaxiibtaadana waxay qaadi kartaa uur.
Ugxanta inta baddan waxay dhacdaa bartamaha inta u dhaxaysa labbo dhiig caado.
Laakiin inbaddan oo dumarka kamid ah ukuntooda waxay weynaataa wakhtiyo kale.
Goormee saaxiibtaada samaysaa ukunta?
Ayadu ma oggaan karto dhab ahaantii.
Inbaddan oo gabdhaha kamid ahi waxay qabaan muddooyin dhiig caado aan caadi ahayn.
Caadada dhiiga ma ahan mid marwalba imaanaysa isku wakhti.
Waxaad u tagi kartaan idinka oo isla jira dhakhtarka dumarka.
Ayada/asaga ayaa idin siin kara tallo ku saabsan kahortaga uurka.
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno-jir ah waxaana shalay galmo la sameeyay saaxiibkayga markii ugu horaysay. Waxaan jeclaystay in aan ka qubeysto kadib galmada, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan nadiif ahaado. Laakiin ma hubi in uu saaxiibkayga midaasi u arkayo in ay tahay dabaalnimo iyo inkale. Dadka kale maxay sameeyaan?
Next Next post: Inbaddan oo kamid ah saaxiibadayda waxay daawadaan filimaan galmo ah. Anigu waxaan ahay wiil 14-sanno-jir ah waxaana ku raaxaystaa daawashada filimaantaasi. Sidoo kale waxaan jeclahay in aan daawado filimaantaan. Laakiin saaxiibadaydu waxay dhahaan waa in ay ahaato mid sir ah. Oo aanan waxna u sheegin dadka waaweyn. Maxay sidaasi u tahay?